Ogaden News Agency (ONA) – Diyaaradaha Yuhuuda oo Duqeeyay Sal-Dhig Ciidan oo Dimishiq Kuyaala.
Diyaaradaha Yuhuuda oo Duqeeyay Sal-Dhig Ciidan oo Dimishiq Kuyaala.
Madaafiic ay Israa’iil ridday ayaa qaraxo waa wayn iyo holac ka kiciyay xarun ciidan oo u dhaw garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha ee magaalada Dimishiq, sida ay sheegtay warbaahinta dawladda Suuriya .
Haan shidaal iyo bakhaaro ayay waxyeelo soo gaadhay sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Sana. Laakiin jabhadaha Suuriya waxay sheegeen in meesha gantaalka lagu dhuftay ay lahaayeen dhaqdhaqaaqa Xisbullaah oo Suuriya dagaal ka wada iyaga oo garab u ah ciidammada dawladda.
Dawladda Yahuuda ayaa sheegtay in weerarkaasi uu “qayb” ka yahay siyaasaddeeda ku aadan in ay ka hortagto in Iiraan ay si qarsoodi ah hub ugu gudbiso Xisbullaah. Laakiin ma aysan carabka ku dhufanin in ay masuul ka tahay weerarkaas.
Israa’iil ayaa Xisbullah iyo Iiran oo taageerta u aragta halista ugu wayn ee haysata. Xisbullah ayay dagaal la galay Yuhuuda sanadkii 2006dii, intaas wixii ka dambeeyayna ururkaasi si wayn ayuu u xoogaystay. Qolyaha xuquuqda aadanaha la socda ee Suuriya oo fadhigoodu yahay wadanka Britain ayaa sheegay in qaraxa xoogga badan laga maqlay caasimadda oo dhan subaxnimadii hore ee Khamiista.
Wakaaladda wararka ee Sana waxay sheegtay in gantaallo badan lagu dhuftay xero ciidan oo ku taalla koonfurta galbeed ee garoonka magaalada Dimishiq, uuna burburiyay qalab badan. TV ga Al-Mayadeen ee dawladda taageera ayaa sheegay in gantaalada ay soo rideen diyaaraddo ay Israa’iil leedahay oo marayay hawada sare ee buuraha Golan Heights oo ay Israa’iil haysato.